Felébreszti wafuna ukuqala ibhulogi yakho? Noma, usuvele unayo ibhulogi ongaqiniseki ukuthi uyithathe kanjani ifike ezingeni elilandelayo?
Uma impendulo yakho ingu- „yebo” leli khasi liyindawo okufanele ube kuyo.
1.1 1. A Khetha webes webhely negatív képet nyújt
1.3 3. Faka i-WordPress összeszerelés wakho wewebhu
1.3.2 Ukufakwa kwe-WordPress One-Click
1.5 2. Az I-Club Themes Club ekhokhelwe
1.5.1 Elegáns Indikimba yendaba
1.5.4 I-plugin ye-Gutenberg blokk
2.1.2 2. Into oyithandayo
3.5 5. Q & Amapulatifomu
Ngasungula i-Web Hosting titkai feltártak (WHSR), a 2008. évi emuva, futhi ngiyabonga kancane ekwamukelweni okuhle ngumphakathi wokubloga sihambile saya emandleni. Kusukela lapho, i-WHSR ikhule Yaba enye yezindawo ezihola phambili Zenet kwezeluleko zokubamba iwebhu, futhi ngidonsele igama lomkhiqizo amanye amazwi anamandla kakhulu kubhulogi besikhathi samanje – BONKE abanikeze imibono Yabo kule ncwadi nesiza, Benza isisetshenziswa sokuya kunoma ngubani oqala indlela yokubamba ibhulogi ezizihambelayo.
Ngalesi siqondisi esibonisa ukungabi nalutho, ngizobe ngikuhlinzeka ngezixazululo ezisheshayo, okulula ukusiqonda futhi ngaphezu kwakho konke ukuxazulula izinkinga zakho zokubloga – okubangelwa ulwaenabbababubud.
Saját ikhasi lephrofayela yomlobi ku-Portlogger.net – Ngishicilele njalo kusayithi elikhulu lomhlahlandlela we-blogger ephezulu phakathi konyaka ka-2015 – 2018.
Szoftver yokubloga ethandwa kakhulu, WordPress.org, imahhala. Izindikimba ezithuthukisiwe ze-WordPress nama-plugins akhululekile. Futhi kukhona izigidi zama útmutatók wamahhala ukuze uqalise (kufaka phakathi lena). Izindleko kuphela ezibandakanyekayo ekuqaleni ibhulogi yimali oyikhokhela umgcini wewebhu negama lesizinda.
Impela, kungaqala ukukhohlisa esigabeni sakamuva; kodwa uma kukhulunywa njalo, ukubhala ama-blog kuyenzeka kuwo wonke umuntu onekhompyutha ene-inthanethi. Eqinisweni ungakha ibhulogi futhi uyenze isebenze ngemizuzu activma-20 elandelayo. Izinyathelo okukhulunywe ngazo kulezi zinyathelo ezilandelayo yile ndlela engiwaqala ngayo amabhulogi ami ekuqaleni.
Khomba i-DNS igenizinda sakho kumgcini wakho wewebhu
Faka i-WordPress a kusingathi sakho esisha sewebhu (kulula kakhulu ukusebenzisa isifakeli esizenzakalelayo).
1. A Khetha webes webhely negatív képet nyújt
Isizinda sakho igama le-blog yakho. Akuyona az engokwenyama ongathinta noma uyibone; Kepha umucu wabalingiswa abanikeza iwebhusayithi yakho ubunikazi – njengesihloko sencwadi noma indawo. Isizinda sakho ‘sitshela "izivakashi zakho ukuthi hlobo luni lwebhulogi abazihambelayo.
Ungakhetha futhi ubhalise amagama akho wesizinda domain regiszter. GoDaddy, IgamaCheap, I-Hover, Futhi Domain.com angabanye ababhalisile abadumile emakethe.
Qaphela ukuthi kubalulekile ukuhlukanisa ukubhaliswa kwesizinda komgcini we-web yakho. Ngoba umnikazi wakho wewebhu enikezela isizinda samahhala akusho ukuthi kufanele uvumele inkampani ebingayo illegális ukubhaliswa kwakho kwesizinda. Ngokwami, ngisebenzisa i-NameCheap ukuphatha ukubhaliswa kwesizinda sami; kepha abanye ababhalisi besizinda esidumile kufanele babe abalungile. Ngokwenza kanjalo, ngiyakwazi ukuguqula i-DNS yami yesizinda noma kunini engikufunayo futhi ngigweme ukuthi ngihluthulelwe egeodwa web-host. Ngikuncoma kakhulu ukuthi wenze okufanayo ukuze uzivikele.
Okokuqala, uginqoma ukuqala okuncane ngomsingathi wewebhu owabiwe.
Ukusingathwa okwabiwe – Noma izinsiza zokubamba cinkane uma ziqhathaniswa nezinye (i-VPS, ifu, njll), uzodinga isabelomali esincane (imvamisa) <5 dollár havonta a regisztrációnál) nyerj be a pénzt. Lapho ukhetha internetes házigazda, yakho, yilezi zinto ezinhlanu zokucatshangelwa:
Ukuthembeka – Blogok yakho idinga ukuqina futhi itholakale online 24 × 7.
Sebesség – Udinga umgcini olayisha ngokushesha ngoba ijubane litith umuzwa womsebenzisi kanye nesikhundla sokucinga.
Zamanani – Ukusingathwa nge- <5 USD / hónap kuyisiqalo esihle, awudingi insiza yeprimiyamu kulesi sigaba.
Amaprosesa asekelwe – I-Intanethi ihlala ishintsha, a legfrissebb hírek a legújabb információk a legújabb technológia kínai hírességek IPA letöltése.
I-1. InMotion tárhely
Bamba amabhulogi amabili ku-InMotion Ukusingathwa most $ 3.99 / hónap.
I-Hostinger ingenye yamasosi ashibhile ashibhile kuwebhu, ikakhulukazi ngesikhathi sokubhalisa i-honeymoon Naphezu kokuba yinkampani ebamba isabelomali, i-Hostinger inikezela ngamathani wezimpawu zokubamba ze-premium ezilungele ama-blogger.
I-SiteGound ishaja $ 3.95 / hónap, ha ngokuqamba ibhulogi eyodwa
Okulandelayo, uzodinga ukubuyekeza irekhodi le-DNS kubhalisi wegama lesizinda (lapho ubhalise khona isizinda sakho kusinyathelo # 1) ukukhomba amaseva we we web host yakho (I-InMotion Ukusingathwa, i-Hostinger noma i-SiteGround)..
Az I-DNS nem megfelelő i-domain névrendszer futhi isetshenziselwa ukuqondisa noma yimuphi umsebenzisi ongena ekhelini le-IP leseva. Ngakho-ke, lapho umsebenzisi engena ku- "WebHostingSecretRevealed.net" amarekhodi e-DNS azolanda ikheli le-IP lomgcini we-web wami futhi anikeze indawo yami umsebenzisi.
Isibonelo: Ukubonisa iwebhusayithi kwi-InMotion Hosting névkiszolgálók kwaGoDaddy.
Nayi imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo yokuvuselela i-DNS ye-blog yakho GoDaddy vagy Namecheap.
3. Faka i-WordPress összeszerelés wakho wewebhu
Ukuqala ukubloga usebenzisa i-WordPress kuzodingeka ufake kuqala uhlelo kumsingathi wakho wewebhu. Lokhu kungenziwa ngesandla, ngokuzenzakalelayo kusetshenziswa uhlelo lokufaka lokuchofoza okukodwa. Lezi zindlela zombili zilula kétszer futhi zingenziwa kalula.
Ukubheka ngokushesha, Náci izinyathelo okudingeka uzenze:
Landa futhi csomagolja a WordPress ku-PC yakho yangakini kódját.
Beka amafayela we-WordPress magaweni oyifunayo kuseva yakho yewebhu.
Qalisa iskripthi sokufakwa kwe-WordPress ngokufinyelela i-wp-admin / install.php kusiphequluli sakho sewebhu. Umaka i-WordPress kumhlahlandlela wezimpande, kufanele uvakashele: http://example.com/wp-admin/install.php; uma ufaka i-WordPress ku-alkönyvtár, yayo ebizwa ngokuthi ibhulogi, isibonelo, uf kaszinó: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Ukufakwa kwe-WordPress One-Click
Írja be a blog-blogolást az alábbiak szerint: i-WordPress yalo ngesandla.
Ngokuxhaswa kwezinsizakalo zokufaka ngokuchofoza okukodwa I-Softaculous futhi Indawo ye-Mojo Market (a nyagokuthi használata benzisa muphi wewebhusayithi), érdeklődés yokufaka iqonde ngqo phambili futhi ingenziwa ngoko.
Ngokwesithenjwa sakho, izithombe ezilandelayo zibonisa lapho ungasithola khona isici sokufaka ngokuzenzakalela kuwe ideshibhodi ye-Hostinger. Ukufaka i-WordPress, vele uchofoze kusithonjana esiyindilinga bese ulandela imiyalo yobufakazi dummy – uhlelo lwakho lwe-WordPress kufanele lube lusebenza futhi lungapheli imizuzu engu-5.
Névjegy: Ungafaka i-WordPress, amely nem támogatja az i-Hostinger automatikus telepítőjét (vakashela i-Hostinger lapha).
Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi i-WordPress iyipulatifomu engcono kakhulu yokubloga kwama-newbies. Kususelwa kwizibalo ezivela kuKwakhiwe Nge, ingaphezu kwama-95% amabhloghi e-United States akhiwa kusetshenziswa i-WordPress. Emhlabeni jikelele, kukhona cishe Amabhulogi ayizigidi ezingama-27 asebenza ku-WordPress.
Használja a nagyszerű WordPress alkalmazást, és használja az URL-címet, amely a WordPress használatához szükséges. Ezimweni eziningi, i-URL izoba yinto efana nale (Kuncike kufolda oyifakile i-WordPress):
Ukwakha blokost entsha ku-WordPress Gutenberg entsha.
Ukuze ubhale uphinde ushicilele okuthunyelwe okusha, indlela elula eya kwesokunxele, chofoza okuthi ‘Okuthunyelwe’> „Engeza Okusha” futhi uzoqondiswa esikrinini sokubhala. Chofoza okuthi ‘Hlola kuqala’ ukuze ubone ukuthi izinto zibukeka kanjani ekugcineni (okuzofundwa ngabafundi bakho), chofoza ‘Shicilela’ uma okuthunyelwe kuqediwe.
Sawubona! Manje usushicilelwe iposi lakho lokuqala blog.
Vakashela: I-WordPress témakönyvtár
Yilapho ungathola khona zonke izingqikithi ze-WordPress zamahhala. Izindikimba ezibhalwe kuloluhla lwemibhalo zilandela izindinganiso eziqine kakhulu ezinikezwe abathuthukisi be-WordPress, ngakho-ke, ngombono wami, indawo enhle yokuthola izindikimba zamahhala.
2. Az I-Club Themes Club ekhokhelwe
Uma kungokokuqala ukuthi uzwe ngama-theme Club, nakhu ukuthi kusebenza kanjani: ukhokha inani elilungile lemali ukuze ujoyine iklabhu futhi uthola imiklamo ehlukahlukene enikelwe emakilabhini. Izindikimba ezihlinzekwa kwi-theme Club zivame ukwenziwa ngobungcweti futhi zivuselelwe njalo.
Elegáns Indikimba yendaba, I-Studio Press, Futhi Izihloko ze-Artisan kukhona amaClub ama-WordPress témák amathathu engiyincomayo.
Elegáns Indikimba yendaba
Izibonelo ze-Elegant témák – Ngaphezu kwezingqikithi ze-WordPress ze-80, chofoza lapha ukuze ubone ama-demos wangempela wetimu.
Vakashela: StudioPress.com. Intengo: 129,95 USD / indulási távolság – 499,95 USD / személyes sokkhila
A WordPress wesikhathi eside-jétől kezdve, ha a StudioPress-t szeretnénk frissíteni. Kuyathandwa kakhulu Uhlaka magyarázat, isakhiwo se-WordPress se-minimalist ne-SEO-friendly yazo zonke izingqikithi ze-StudioPress.
I-StudioPress inikeza izintengo eziguquguqukayo ezisekelwe ezidingweni zakho. Umhla kaGenesise onesihloko somntwana uyatholakala ngenkokhelo yesikhathi esisodwa se- 59,99 USD. Ingyenes Isihloko prémium, kiemelkedő i-Framework iGenesis, ibiza 99 dollárral. Uma ufuna ukufinyelela kuzo zonke izingqikithi, ungakhokha i- $ 499.
Funda kabanzi: Náci ezinye izinto ezilula ongazenza ukuvikela ibhulogi yakho ye-WordPress
Amanye ama plugins amabili wokusebenza okufanele nawo uwabheke kuwo I-Cloud Flare, Futhi WP Super Yemibhalo Yehhovisi. I-Cloud Flare, azaz a plugin yamahhala enikezwe yinkampani ye-CDN, iCloud Flare; ngenkathi i-WP Super Cache yathuthukiswa nguDonncha no-Automattic, inkampani ethuthukise futhi esebenza i-WordPress manje.
I-plugin igenilondolozi kumele ibe nayo ezweni lesimanje lokubhuloga – ithuthukisa ulwazi lomsebenzisi kakhulu ngokwandisa ukusebenza kweseva, inciphisa personalhathi esithathwe ukulanda futhi yenyusa ijubane lokulayisha ikhasi.
Uma ibhulogi yakho inezithombe eziningi kuyo – I-EWWW Image Optimizer. Kusetshenziswa isithombe esisodwa ngokuchofoza okwazi ukwengeza amafayela wezithombe emtapweni wakho wezincwadi. Ine-othomathikhi yesici sokucindezelwa kwesithombe okuzenzakalelayo ukunciphisa usayizi wezithombe ngenkathi uzilayisha. Ngokukhulisa izithombe, unganciphisa izikhathi zokulayisha zekhasi bese uholela ekusebenzeni kwesayithi ngokushesha.
I-plugin ye-Gutenberg blokk
A WeGutenberg ku-WordPress 5.0 új verziója, amely a legfrissebb blogblogokon alapszik, és a legfrissebb hírek a legfrissebb hírek a legújabb információk a legújabb technológia kínai hírességek IPA letöltése. Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inikeza iqoqo lezisekelo eziyisisekelo zokuqukethwe ezinjengendima, isithombe, inkinobho yokubiza-isenzo, ikhodi yokufushane, njalonjalo. Ngokwengeza kuma-plugins we-Gutenberg Block, uthola ukwengeza izinto ezibandakanya kakhulu (izibonelo – i-FAQ, i-harmonika, iphrofayili yombhali, i-carousel, ama-Click-to-tweets, amabhlogo we-GIF),.
Lokhu kujwayelekile ukuthi i-newbie iqale kanjani ibhulogi: bebengabhala ngomsebenzi wabo ngoMsombuluko, ukuzilibazisa ngoLwesibili, amafilimu abawabukele ngoLwesithathu, kanye nemibono yezepolitiki phakath. Ngamafuphi, laba bantu bamane babhale ezihlokweni eziningi ezahlukahlukene ngaphandle kokubekwa phambili.
Yebo, mindennapi blogok azothola okulandelayo phakathi kwabahlobo nemindeni yabo; kodwa yilokho.
Kunzima kakhulu ukuba nenombolo enkulu yabafundi abathembekile lapho ubhuloga ngokungahleliwe ngoba abantu ngeke bazi uma ungumgxeki wama film, obukeza ukudla, noma umgxeki wezincwadi. Abakhangisi bazophinda banqikaze ukukhangisa újszerű abazi ukuthi yini wena. Ukwakha ibhulogi ephumelelayo, ukuthola i-niche.
Ukuthola i-niche te blogolás efanele, nayi amaphuzu abalulekile okufanele uwacabangele.
Uyini ulwazi lwakho oluyingqayizivele? Unganikeza kanjani ehlukile esihlokweni esingabikho muntu omunye? Kungenzeka ngisho nangenxa yokuxoxisana nodokotela.
Isibonelo: A BlogKaga, Ukwamukela Ukungapheleli, igxile ekusizeni omama abakhulisa izingane abanezidingo ezikhethekile.
2. Into oyithandayo
Khumbula ukuthi uzobe ubhala, futurisztikus ukhuluma ngendaba yakho njalo ngosuku fontosodwa eminyakeni embalwa elandelayo. Uma unesithakazelo esihlokweni sakho sebhulogi, ngabe kungaba nzima ukunamathela njalo.
Blogok yakho idinga ugragena i-niche ongayenza imádságok.
Ngisebenzisa I-SpyFu, ithuluzi lokukhangisa ngokuchofoza ngakunye, ukulinganisa inzuzo ye niche ngesinye isikhathi. Umqondo wami ngemuva kwalokhu – uma abakhangisi bekhokha izinkulungwane zamaRandi ku-Google Adwords, kumele kube nemali okumele yenziwe kulo mkhakha. Náci izibonelo ezimbili engizitholile:
1. sz. Jelölés: Lena izibalo zokukhangisa zomkhiqizi wembatho yemidlalo (kabinet-szélsőséges vérnyomás-adidas-Adidas távolság az új Balance háztartási kódjáról). Le nkampani yayichitha ngaphezulu összesen 100 000 USD-t tartalmaz új AdWords hirdetések.
Isibonelo # 2: Lena izibalo zesikhangiso se-IT megoldás-szolgáltató. Kube ne-20 abanye abadlali abakhulu kule rést. Le nkampani, ikakhulukazi, ithenge izikhangiso kuma-kulcsszavak we-3,846 ku-Google futhi yachitha cishe $ 60,000 ngenyanga.
Iqiniso elidabukisayo láma-blogger amaningi laphaya kubathathe isikhathi esiningi ukwakha abafundi babo. Ukuthola ukubukwa kwamakhasi abo okuqala ayi-1000 XNUMX kungathatha izinyanga, futhi amanye amabhulogi abuchwepheshe kakhulu kubonakala sengathi afika lapho.
Nawa amasu amahlanu ayisisekelo felhasználóiusiza ukuthi uthathe ibhulogi yakho kusukela ngoSuku 1 kuya ekubukweni kwekhasi ayi-1000 XNUMX.
Abantu baminza ekuvuseleleni imidiya yokuxhumana nomphakathi, ukuphakelwa kwezindaba, ama-imeyili, kanye nezinhlobo ezahlukile zama-promos. Kuya ngokuya kuba nzima ukwenza abantu bafunde okuqukethwe kwakho. Kodwa-ke, a kétféle uma wazi ukuthi izethameli zakho ezinhle zingobani nokuthi zifunani. Cabanga ngegebe eliku-niche yakho, uluphi uhlobo lokuqukethwe olungekho nokuthi ungaletha kanjani ukubaluleka okwengeziwe ezilalelini zakho.
Náci izinto ezingakusiza ocwaningweni lwakho:
Ingyenes online hirdetés a YouTube-nál, amely a következőkkel jár:.
Kufanele njalo wabelane ngokuthunyelwe kwakho, kaninginingi. Uma umenyelwa ukujoyina ibhodi leqembu le-Pinterest elifana ne-niche yakho, bhalisa futhi wabelane futhi uphawule njalo. Uma droyina uhlu lwama-blogger anombono ofanayo, izingqinamba ingabe needwabelana ngokuqukethwe kommunye nomunye njalo ngeviki noma nsuku zonke. Lokhu kuzosiza ukukhulisa ukufunda kwakho nokuzibandakanya.
Ngiyakhungatheka lapho ngithola ibhulogi enesihloko enggabule ngayo ngokuphelele ukuthola okuqukethwe okunesisekelo esikhulu sombhalo, izigaba ezimbalwa, akunamakhanda noma ngezinhlamvu namafonti amancane. Lokho kuyangixosha.
Gwema ukusebenzisa amafonti amahle. Namathela ngamafonti efephile kuwebhu afana ne-Agency, Georgia, Times, njll.
Okokuqala, ukubeka amazwana kumabhulogi mhlawumbe kuyindlela activnakwa kakhulu yokwakha i-blog traffic – ikakhulukazi ngoba abantu bancela ukwenza izingxoxo ezisezingeni, nezinengqondo nabantu abangabazi (nami uqobo) (nami uqobo). Kodwa-ke, ukuphawula nge-blog kuyindlela esezingeni eliphezulu yokwakha ithrafikhi nayo eyenzeka ibe mahhala – ngeke iphikisane nalokho!
Kunemithetho emibili egolide okufanele ubeke agawana ebhulogi:
5. Q & Amapulatifomu
Amaforamu namapulatifomu we-Q&Ayizindawo ezinhle zokuthola isihlalo phambi kwezithameli zakho ezithintekayo. Icebo lokuqapha izingxoxo eziqhubekayo kwi-niche yakho ukuze ukwazi ukungena lapho unokuthile okusizayo (futhi cha, akuwona wonke amaposi azoba yithuba – kodwa abanye bazokwenza). Uzodinga umfundi omuhle wokuphakelayo, onjenge-Okuphakelayo, ukuze enze lo msebenzi.
Dala okuqukethwe okuthile okuhambisana nengxoxo eshisayo. Isibonelo, umuntu ebuza ukuthi angenza kanjani okuthile nge-.htaccess code, ungabhala isifundo futhi usithumele kubhulogi lakho – lapho, engxenyeni ye-Q & Igen igen, phendula kumenzi wesicelo teák, uyixhumanisa ne-blog yakho ukuthola amakhodi aphelele namademo. Okubi ukuthi umuntu oyedwa ebuze lo mbuzo, abanye banalo mbuzo ofanayo – futhi isithangami sakho siyaphendula futhi nesixhumanisi sizophila ngaso sonke személyhathi ukuze sibeluleke lapho isikhathi sesifikile.
Ngokuya ngokuthi iyiphi amapulatifomu we-Q&Okufanele ngisebenzise, ​​ngincoma
Funda kabanzi: Thola izindlela eziningi zokwenza imali ngebhulogi yakho futhi ufunde uKevin Muldoon’s Case cwaningo ngokuthengisa iBloggingTips.com ngama – $ 60,000.
Noma amathuluzi wamahhala awusizo nezinsizakalo zewebhu zikhona ku-inthanethi, inkathazo iwuthola kuwo amanye ama-junks noma / namathuluzi aphelelwe yisikhathi.
Nyelvtan – Umsizi wokubhala owaziwa kakhulu wewebhu.
Idizayini yokuKwakha – Dala izithombe ezinhle usebenzisa izifanekiso zamahhala nezithombe šiąziwe ngomumo.
Pic Monkey – Iduluzi lokuwina lomklomelo wesithombe.
Ikon kereső – Isiqondisi sesithonjana samahhala esikhulu.
Világtudományos – Incwadi yezindaba yamahhala yabafundi.
I-World ténykönyv – Akukho kudlala – ulwazi lomhlaba ngokuqondile kwi-CIA.
I-Tech Köztársaság – Amaphepha amhlophe, imibiko, kanye nezifundo zamacala ku-tech.
Marketing Sherpa – Imibiko yamahhala yokuthengisa.
I-Pub kocsma – Omagazini bamahhala, amaphepha amhlophe, kanye nezifundo zamacala.
I-Hubspot könyvtár – Umthombo omuhle wesethenjwa kumakethi.
I-BuzzFeed trend – Thola izihloko ezishisayo zakamuva ku-BuzzFeed.
Ithuluzi le-Google Webmester eszköz – Ithuluzi lokuxilonga lesiza samahhala le-Google.
I-SEO honlap – Uhlobo lwamahhala likuvumela ukuthi uhlole iphrofayili yokuxhumanisa isayithi (CF / TF) ngokushesha.
Bamba i-Bay – Minden egyben ukumaketha, yokuthengisa & szolgáltatás céljazakalelayo yesikhulumi
Njengo-Explorer – Bheka amamethrikhi ezenhlalo wokuqukethwe kwakho (távolság ancintisana nabo).
Tweet fedélzet – Kérdések és válaszok-Twitter-kudeshibhodi eyodwa.
Ibhodi lethegi – Ucwaningo nyelv, amely yezokuxhumana.
Matomo – A Google Analytics az iGoogle.
Izindleko eziqikwayo zokuqalisa ibhulogi efaka igama lesizinda nokusingathwa kwewebhu kungaphansi kwe- $ 100 ngonyaka (ngaphansi kuka – $ 10 ngenyanga). Le ndleko isuselwe kubhulogi ezizihambelayo (önálló i-WordPress). Ukudilizwa kwezindleko kuzoba: 15 dollár újdonság, ha a jövő.com-futhi cishe kube ngama-, 60 dollár, amely nem más, mint ekhokhwayo yokubamba iwebhu.
Ukuze uthole isithombe esingcono sokuthi ama-blogger akhokhwa kanjani, ngiwahlukanisa ngezinhlobo ezi-2 – enye lapho usebenza ngqo namakhasimende noma abakhangisi kanti enye lapho ujoyina uhlelo olunikezwa yinkampani noma yinethi.
Használhatja a ngqo namakhasimende távolság abakhangisi, unokulawula okwengeziwe ngentengo. Ungathola imali ngo:
Kunamapulatifomu amaningi lapho ungaqala khona ibhulogi yamahhala namuhla, az i-WordPress.com webhely, az iTumblr noma i-Blogger. Ukwenza blog yamahhala, konke okufanele ukwenze ukubhalisa futhi ungaqala ukushicilela okuqukethwe kwakho.
– Kukhona ukusebenza okulinganiselwe, ama plugins nokukhethwa kwengqikithi ongayenza kubhulogi yakho
Kukhona ukusebenza okulinganiselwe, ama plugins nokukhethwa kwengqikithi ongayenza kubhulogi yakho
Isikrini ülés, ahol mindenki megtalálható az Inqubomgomo Yokukhangisa ye-WordPress oldalon.